﻿ ‘सरकार, तिम्रै अगाडी भारतले हामीलाई विष खुवाइरहेको छ’
आजकाल मलाई तरकारी र फलफुल खान डर लाग्ने गर्छ । डर कसरी नलागोस् त ? आफुले खाने खानामा विषादि हालेको थाहा हुँदा हुँदै कसलाई खान मन लाग्छ ?
साँच्चै, मलाई तरकारी र फलफूल खाँदा विष चपाइरहेझै लाग्छ ।
केहि दिन अगाडि मात्र इटहरी उपमहानगरपालिकाले कार्वाइड हालेको आँप बिक्रिका लागि राखिएको फेला पारेको थियो । खाद्यविज्ञका अनुसार कार्वाइडयुक्त आप खाए क्यान्सर जस्ता रोगहरु लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।
भारतबाट विषादी युक्त खानेकुराहरु दैनिक भित्रिइरहेका छन् । हाम्रो बजारमा भारतीय तरकारी र फलफूलले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । हामी खानेकुरा होइन, विष किनेर खाइरहेका रहेछौं । त्यसैले मलाई आजकाल बेचैनी हुन्छ ।
घातक विषादिहरु प्रयोग गरिएका फलफूल तथा तरकारी निर्बाध रुपमा नेपाल भित्रदाँ हाम्रो देशको सरकार कहाँ छ ? किन सबै मौन छन् ? ए मेरो देशको सरकार, भारतले तिम्रै अघि हामीलाई विष खुवाइरहेको छ । हामी रोगी भइरहेका छौं । तिम्रो देशको जनशक्ति औषधी उपचार र अस्पताल धाउँदै व्यस्त छ सरकार ।
विष हालिएको तरकारी नेपाल भित्रिएको यो पहिलो पटक होइन । यो सरकारको पालामा मात्र होइन । निकै अघिदेखि विष मिसिएको तरकारी र फलफूल नेपाल भित्रिएको हो ।
भर्खरै मात्र ओली सरकारले भारतबाट आएको तरकारी र फलफूलको विषादी परिक्षण गर्न रोक लगाएको छ । रोक लगाउनुअघि ओली सरकारले तरकारी र फलफूलको विषादी जाँच गर्ने कोसिस गरेको थियो । तर भारतको दबाबपछि उक्त निर्णयबाट पछि हट्न नेपाल बाध्य भयो ।
भारतबाट नेपाल आउने फलफुल तथा तरकारीमा ८३ प्रतिशत सम्म विषादी भएको पाइएको छ । यति धेरै विषादी भएको तरकारी नेपाल भित्राउन रोक लगाउनु साटो सरकारले भारतको दबाबमा भारतबाट आएका तरकारीको परिक्षणमा पनि रोक लगाएको छ ।
त्यसो त नेपालका कृषकहरुले पनि तरकारी तथा फलफूलमा विषादी प्रयोग नगर्ने हैनन् । तर नेपालका तरकारीमा भन्दा भारतबाट ल्याइएको तरकारीमा बढि विषादी पाइएको छ ।
यसबाट नेपाल सरकारको जवाफदेहीता कमजोर साबित देखिएको छ । के सरकार हामी विष खाएर क्यान्सरजस्ता रोगहरु लागेर ज्यान गुमाउनलाई विषादी नेपाल भित्रीन दिएको हो ? तरकारी परिक्षणबाट पछि हटेर के हामीलाई आजन्म रोगी बनाउन दिएको हो ? केही भारतीय किसानको व्यथा बुझ्ने सरकार, हाम्रो परिवार बिरामी हुँदाको व्यथा र समस्या किन बुझ्दैनौ ?
बिहान काम गरेर बेलुका खानुपर्ने अवस्थाका हामी नेपाली परिवारको एक सदस्य बिरामी हुँदा कति ठूलो समस्या भोग्नुपर्छ, सोचेको छ कसैले ? परिवारको एउटा सदस्यलाई ठूलो रोग लाग्यो भने परिवार नै अस्तव्यस्त हुन्छ ।
भारतीय विषरहित तरकारीको आयातमा पहिले हामी सचेत हुनुपर्छ । हामीले तरकारी किनेको हो, विष होइन । र नेपाल सरकारलाई विषादीयुक्त तरकारी नेपाल भित्राउँदिनँ भन्ने हक छ । त्यसैले हामी पहिला भारतबाट आउने तरकारीलाई नियमन गरौं । विश्वका धेरै देशले भारतीय तरकारी किन्दैनन् । विषादीको मात्रा उच्च भएकोले भारतीय तरकारी आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाएका छन् ।
त्यसपछि नेपालका कृषकहरूमा चेतना जगाऔं, नियमन गरौं । जनचेतनाको अभाव, पैसाको लोभ, प्रतिबन्धित विषादीको उपलब्धता जस्ता कारणले पनि तरकारी तथा फलफुलमा हानीकारक विषादीको प्रयोग भइरहेको छ । कृषकहरू आफैँले पनि असुरक्षित तरिकाले विषादी प्रयोग गर्दा त्यसको पहिलो शिकार स्वयं भएका छन् ।
यो सँगसँगै हामीले तरकारी खेतीलाई हाम्रो करेसाबारी र कौसीसम्म विस्तार गर्ने अर्को विकल्प पनि छ । कौसी वा करेसामा वा गमलामा फलाएको थोरै तरकारीले एउटा परिवारलाई पुग्छ । सबै परिवारले आफूलाई चाहिने तरकारी आफै फलाउने कामको सुरुवात आजै गर्नुपर्छ । त्यसको लागि स्थानीय तहहरुले उपयुक्त तालिम तथा सहयोग गर्नुपर्छ ।
सुखी नेपाल तबमात्र सम्भव हुन्छ, जब हामी स्वस्थ हुन्छौं । बिरामी हुँदा सरकारले स्वास्थ्य बीमाको सुविधा दिएको छ । तर जनतालाई विष खान दिएर उपचार गरिदिँदा राज्यकोषको दोहनभन्दा अरु केही हुँदैन । त्यसैले रोग लाग्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु राम्रो होइन र ?
यसरी बन्छ डिजिटल नेपाल
स्वतन्त्र र स्वायत्त मिडियाको पक्षमा किन बहस नगर्ने ?